February 1, 2020 - MM Live News
အားလုံး ကွားခငျြ‌ နတေဲ့ သတငျး ကွားရပါပွီ…
February 1, 2020 MM Live News
တရုတ်တွေ ကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပြီ ” ကဲ အားလုံး ကြားချင်‌ နေတဲ့ သတင်း ကြားပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့တရုတ်ခရီးသွားတွေအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်ပေးတာ ရပ်လိုက်ပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံသားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်ကလာတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံသား မဆို ပေးမဝင်တော့ပါဘူး။ အခုပဲ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက နေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကြမယ့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ယာယီရပ်ဆိုင်းထားဖို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို ဝန်ကြီးဌာနက ညွန်ကြားချက် ထုတ်လိုက်တာပါ။ ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ ပိတ်တာ ဟာဝင်ခွင့်ပိတ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဗီဇာပိတ်တာ နဲ့ ‌တရုတ်နိုင်ငံက လာတဲ့ ဘယ် ခရီးသွား မဆို ပြည်ဝင်ခွင့် မရတော့ပါဘူး။ ပုံ မှန် တရုတ် […]
သိနျး ၁ သောငျး ကံထူးရှငျ ထှကျပျေါလာပါပွီ…
February 1, 2020 February 1, 2020 MM Live News
(၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကို ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာနေသူမှ ဆွတ်ခူးရရှိ အောင်ဘာလေထီ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကို တနိုင်းမြို့နယ် ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာနေ ဦးလယ်မယ်တားက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ထီလက်မှတ်ကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင်ဧရိယာဖြန့်ချိရေးမှ တစ်ဆင့်အရောင်းကိုယ်စလှယ်-ကိုဇော်မိုးထွန်း(ရှဒူးဆွတ်)ထံမှဝယ်ခဲ့သည့် ထီနံပါတ် ဠ-၉၁၁၅၄၆ ဖြင့် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း မြစ်ကြီးနားပင်မထီဆိုင်ကြီးမှသိရသည်။ မြစ်ကြီးနားခရိုင်ဧရိယာဖြန့်ချီရေး မိုးယံရွှေလမင်းနှင့်မြတ်ဆုကုဋေ ထီဆိုင်တွင် ၁၀ကြိမ်မြောက်၌ ကျပ်သိန်း၅၀၀ဆု ၊ ၁၁ကြိမ်မြောက်၌ ကျပ်သိန်း၁၀၀ဆုရှင်များ ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းယင်းထီဆိုင်ကြီးမှသိရသည်။ Credit: Eli Nawm unicode (၁၂)ကွိမျမွောကျ ကပျြသိနျးတဈသောငျးဆုကို ရှဒူးဇှပျကြေးရှာနသေူမှ ဆှတျခူးရရှိ အောငျဘာလထေီ (၁၂)ကွိမျမွောကျ ကပျြသိနျးတဈသောငျးဆုကို တနိုငျးမွို့နယျ ရှဒူးဇှပျကြေးရှာနေ ဦးလယျမယျတားက ဆှတျခူးရရှိခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ အဆိုပါ ထီလကျမှတျကို ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားခရိုငျဧရိယာဖွနျ့ခြိရေးမှ တဈဆငျ့အရောငျးကိုယျစလှယျ-ကိုဇျောမိုးထှနျး(ရှဒူးဆှတျ)ထံမှဝယျခဲ့သညျ့ ထီနံပါတျ ဠ-၉၁၁၅၄၆ ဖွငျ့ ဆှတျခူးရရှိခဲ့ကွောငျး မွဈကွီးနားပငျမထီဆိုငျကွီးမှသိရသညျ။ […]
ဒီနေ့ ညနေ ၅နာရီခနျ့က ပုဂံမွို့ဟောငျး စူဠာမဏိဘုရား တောငျဘကျ တရုတျကားမြားဖွငျ့ မောငျးတကျလာ…
ဒီနေ့ – ၁.၂.၂၀၂၀ – ရက် ညနေ ၅နာရီ အချိန်ခန့် ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် ရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းဖြစ်သည့် အိုးခြမ်းပဲ့ ကုန်းတွင် တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်မှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ကားဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ ထိုအုတ်ကုန်းပေါ်ထိ မောင်းတက်လာပြီး သည်နှင့် အရက်ဘီယာတစ်ဖာ.နှင့် သောက်မည်ပြုစဉ်… ထိုအုတ်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိသော ပုဂံဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန် နှစ်ဦးမှ ဒီရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းပေါ်တွင် ကားများတက်၍ မရကြောင်းနှင့်အရက်ဘီယာကိုလဲသောက်၍ မရကြောင်းယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့စွာဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန်နှစ်ဦးမှပြောဆိုရာ… မြန်မာစကားတတ်သည့် တရုတ်ဧည့်သည်တစ်ဦးမှ သူမှာဧည့်လမ်းညွန်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်သူမှလာပြောစရာမလိုဘူး …..မိမိတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း သူတို့အလုပ် – လူတို့လုပ်တာဘယ်သူမှ သူတို့အားလာပြောစရာမလိုကြောင်း …. သူတို့အား လာရောက်တာမြစ်သောသူသည် အလုပ်မှ ပြုတ်သွားနိုင်ကြောင်း ရင့်သီးသောစကားများဖြင့် ဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန်နှစ်ဦးအားပြောဆိုခဲ့သည်နှင့် ဧည့်လမ်းညွန်နှစ်ဦးမှလဲ မြန်မာစကားပြောတတ်သည့်တရုတ်လူမျိုး – စပုတ်ရှပ်လက်တိုအနက် ဝတ်ထားသူအား ….. ဒါဆို […]
အလှူ ညတရားပှဲမှာ ကလေးလေးတှေ ဘုနျးကွီးကားနားမှာ တှလေို့ ကားကိုဆော့နကွေတယျအထငျနဲ့ သတိပေးဖို့အနားသှားမှာ သှားလိုကျသောအခါ…
အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး …. ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ…. ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အကျီင်္ လေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ ….. နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နှူးမိရပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းလေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါနိုင်ပါလားလို့စဉ်းစားမိရင်း………။ Kyaw Win Tun unicode အလှူမှာ ညတရားပှဲ ဓါတျပုံရိုကျရငျး မဏ်ဍပျရှထှေ့ကျထိုငျနမေိခြိနျလေး …. ကလေးလေးတှေ ဘုနျးကွီးကားနားမှာ တှလေို့ ကြှနျတေျာ့က ကားကိုဆော့နကွေတယျအထငျနဲ့ သတိပေးဖို့အနားသှားမှပဲ ဆော့နကွေတာမဟုတျဘူးဗြ…. ဘုနျးကွီးကားကို သူတို့အကြီင်္ လေးနဲ့ ဖုနျတှသေုတျပေးနတောပဲ။ ခုအခြိနျမှာ လူကွီးတှဘေယျလိုစိတျဓါတျတှပေဲရှိနကွေပါစေ ….. နောငျတဈခြိနျလူကွီးဖွဈလာကွမဲ့ ကြှနျတေျာ့တို့ရှာက ကလေးလေးတှရေဲ့ […]
” Good luck ညီ..” တကယ်သတင်းကောင်းပါ……… ဝူဟန်မြို့ရောက် မြန်မာကျောင်းသားများအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်မည့် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင် ဘိုရင်းလေယာဉ်သည် ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်) ညနေ ၆ နာရီတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါလေယာဉ်တွင် လေယာဉ်မှူးကြီး Capt Khup Khan Maung ဦးဆောင်သည့် လေယာဉ်မှူး သုံးဦး၊ လေယာဉ်မောင် လေးဦး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှစ်ဦး၊ လေ‌ကြောင်းလိုင်းအမှုထမ်း တစ်ဦးနှင့် ကျန်းမာရေးဘက်မှ ဆရာဝန် သုံးဦးပါဝင်သည့်အဖွဲ့က သွားရောက် ခေါ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မြန်မာကျောင်းသား ၆၃ ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက ၎င်းတို့နေထိုင်သည့် နေရာများမှ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်၍ ဝူဟန်မြို့ရှိ လေဆိပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကျောင်းသားများကို […]
ဝူဟနျမွို့မှာ ပိတျမိနတေဲ့ မွနျမာကြောငျးသားမြားအား မွနျမာသံရုံးမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ပွနျလညျထှကျခှာလာရနျ စီစဉျထား
တရုတ်နိုင်ငံ ၀ူဟန်မြို့မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့နေထိုင်ရာနေရာများမှတစ်ဆင့် ၀ူဟန်မြို့ လေဆိပ်သို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ စုစည်းပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများကို တင်ဆောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာရန် စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယင်းမြို့တွင် ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကိုစည်သူကလည်း ” လေဆိပ်သွားနေပါပြီ။ မီဒီယာအသီးသီး က အစ်ကို ၊ အစ်မတွေ ဖုန်းတွေ မခေါ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ Messenger မှာလည်း စာပြန်ဖို့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ကျနော်တို့အတွက်တော့ မေ့မရမယ့် အတွေ့အကြုံ တစ်ခုပါပဲ လို့ ၄င်းရဲ့လူမှု ကွန်ရက်မှာရေးထားပါတယ်။ Photo – Si Thu unicode တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့မှာ ပိတျမိနတေဲ့ မွနျမာကြောငျးသားမြားအား ၎င်းငျးတို့နထေိုငျရာနရောမြားမှတဈဆငျ့ ဝူဟနျမွို့ လဆေိပျသို့တရုတျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံရုံးမှ စုစညျးပို့ဆောငျပေးမညျဖွဈပွီး ကြောငျးသားမြားကို တငျဆောငျကာ […]
တရုတျပွညျမှ ပွနျလာသော ဝမျပေါငျကုမ်ပဏီ ဒုမနျနဂြောအား တာဝနျသိ ပွညျသူမြား လမျးမှာတားဆီး၍ စဈဆေးရနျ ဆေးရုံသို့ပို့…
တရုတ်ပြည်မှ ပြန်လာသော မုံရွာကဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဒုမန်နေဂျာအား မုံရွာမှ တာဝန်သိ ပြည်သူများ လမ်းမှာတားဆီး၍ စစ်ဆေးရန် ဆေးရုံသို့ပို့…. အခုပဲ ဝမ်ပေါင် လက်အောက် ကုမ္မဏီတစ်ခုရဲ့ ဒုမန်နေဂျာ တရုတ်က ပြန်လာတယ် မန်းလေးလေဆိပ်ကနေ မုံရွာလာမယ် ကြားလို့ မုံရွာ တိုးဂိတ်ကနေ သွားစောင့်ပြီး မုံရွာဆေးရုံကြီးမှာ စစ်ဆေးဖို့ ပို့ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတာ မဆေးတာတော့ အစိုးရအလုပ် ကိုယ့်တာဝန်ကတော့ တာဝန်သိပြည်သူတစ်ယောက်အနေနံ့ သတင်းရလို့ မေတ္တာရပ်ခံခေါ်ဆောင် ပို့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် တရုတ်ပြည်မှ ယမန်နေ့က ပြန်ဝင်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ဒုမန်နေဂျာကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ အဝင်ခံပြီး လက်ခံလိုက်သဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော် အလုပ်မဆင်းတော့ကြောင်း အလုပ်သမားများထံ သိရှိရသည်။ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ စီနိုဝမ်း ဆိုက်မှ အလုပ်သမားတစ်ဦးကမူ […]
ထီဆိုငျပိုငျရှငျနဲ့ ရောငျးတဲ့သူတို့ လာပွီး ၁၅၀၀၀ ဆုပေါကျတယျလို့ပွောတော့ ထိုးထားတာက (၁၂၀၀၀) ကပျြဖိုးဆိုတော့ ငှေ(၃၀၀၀)တော့မွတျတယျဆိုတဲ့ သိနျး ၁၅၀၀၀ ဆုရှငျ…
၁၂ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကို ကျုံပျော်မြို့နယ် ၊ ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာမှ ဆွတ်ခူးရရှိ ကျုံပျော် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ၁၂ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ အောင်ဘာလေသိန်းဆုကြီးကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာမှ ဦးဇော်မင်းထွန်း၊ ဆရာမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း မိသားစုက ယနေ့ဆွတ်ခူးရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ” ကျွန်မက အခုထီလာရောင်းတဲ့သူဆီမှာ ထီထိုးနေတာ ၆ လလောက်ရှိပါပြီ။ လတိုင်းထိုးမယ်လို့ ပြောထားလို့ သူကလည်း အိမ်ကို လာလာပြီးရောင်းပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် (၉)စောင်ထိုးတဲ့အထဲကမှ အခုဆုကြီးကို ပေါက်ခဲ့တာပါ။ မနက်က ထီဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ ရောင်းတဲ့သူတို့ ရောက်လာပြီး ၁၅၀၀၀ ဆုပေါက်တယ်လို့ပြောတော့ ၊ ထိုးထားတာက (၁၂၀၀၀) ကျပ်ဖိုးဆိုတော့ ငွေ(၃၀၀၀)တော့မြတ်တာပေါ့လို့ စိတ်ထဲတွေးမိသေးတယ်။ […]
ဝူဟနျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ရဲ့ မြိုးရိုးဗီဇ အမြိုးအစား ကို ဂပြနျ က ရှာတှသှေ့ား ပါပွီ….
ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ အမျိုးအစား ကို ဂျပန် က ရှာတွေ့သွား ပါပြီ ဝူ ဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအမျိုးအစားကို ဂျပန်ကရှာတွေ့သွားတာပါ။ ဆေးကမထွက်သေးပါဘူးနော်။ influenza C နဲ့ ၉၉% မျိုးနွယ်တူဆင်နေတော့ အမြန်ဆုံးစမ်းသပ်စထုတ်နိုင်တော့မှာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကုတ်ကို သိပြီဆိုတော့မကြာခင် ဆေးဖော်လို့ရတော့မှာပါ။ အနာသိပြီမို့ ဆေးရှိတော့မှာပါလို့စ်။ ဂျပန်တွေကဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဟာ အခုနှစ်အတွင်းမှာ လူတွေအရမ်းကြောက်ကြတဲ့ အကူးမြန်တဲ့ (influenza) တုပ်ကွေးအဖျားရောဂါ ကို ဆေးတလုံးထဲသောက်ရုံနဲ့ပျောက်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (အိမ်ကအမျိုးသားရှေ့လက (influenza) တုပ်ကွေးအဖျားရောဂါ ဖြစ်တာ ဆေးတလုံးထဲသောက်ပျောက်သွားတာပါ။ ယမ်း ၅၀၀၀ မြန်မာငွေ ၆၇၀၀၀ ပေးရပါတယ်။ အရင်လိုတပတ် (မနက် နေ့လည် ညသောက်စရာမလို) အဖျားကြီး ကိုယ်ပူကိုက်ခဲချောင်းဆိုးနာကျင်တာတွေလည်း သောက်ပီးတစ်ရက်အတွင်း ပျောက်သွားတာပါ။ […]
၁၂ ကွိမျမွောကျ သိနျး၁၅၀၀၀ဆုကွီး ကံထူးရှငျထှကျပျေါလာပါပွီ…
၁၂ ကြိမ်မြောက် သိန်း၁၅၀၀၀ဆုကြီး ကံထူးရှင်မိသားစု ကို‌ဇော်မင်းထွန်း+ ဆရာမဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာ ကျုံပျော်မြို့နယ်ကဟု သိရပါတယ်…. ကျုံပျော်မြိုမှ သိန်း၁၅၀၀၀ဆုကြီးကံထူးရှင် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (1.2.2020) သိန်း(15000) ဠ ၈၅၇၅၂၀ သိန့း(10000) ဠ ၉၁၁၅၄၆ သိန်း(၅၀၀၀) ဠ ၆၁၅၃၃၇ ဏ ၁၂၆၂၁၈ သိန်း(2000) ဂ ၁၃၁၉၆၃ ရ ၇၀၂၇၆၉ ကစ ၁၄၅၇၄၃ ကက ၄၆၁၈၇၀ တ ၃၀၅၁၂၆ ကဂ ၃၃၁၆၄၃ ယ ၉၈၈၅၇၇ သိန်း(1000) ကဆ ၅၀၇၄၂၀ ဓ ၄၂၃၆၈၈ ဂ ၆၀၉၂၇၄ ဠ ၁၅၇၁၂၄ ဓ ၆၈၀၈၇၅ ဍ ၇၂၂၀၉၆ ည […]